Thwebula Spotflux 3.1.0.158 – Vessoft
Spotflux – a isofthiwe for the engaziwa futhi evikelekile ukufinyelela internet. Isofthiwe ukufakwa inethiwekhi umshayeli ekhethekile ohlelweni lapho encrypts futhi ithumela traffic internet ngokusebenzisa Spotflux ifu. Spotflux uhlola amaphakethe, ukuthi ukuya abasebenzisi lingenawo amagciwane, malware, ukukhangisa kanye nezinye modules engadingeki. Isofthiwe ikuvumela ukubuka izingodo we yimuphi traffic ivinjiwe. Spotflux uyakwazi ngemfihlo futhi kulondeke uxhumano lwe-inthanethi ngokusebenzisa LAN noma Wi-Fi.
Anonymous futhi ukufinyelela evikelekile ku-intanethi
Uhlanza amaphakethe engenayo evela izinsongo ahlukahlukene
Ukubukwa izingodo traffic ivinjiwe
Amazwana on Spotflux:
Spotflux Ahlobene software:
Ukungena kokukude The ithuluzi for the ukungena kokukude kwikhompyutha noma iseva ngokusebenzisa internet. Isofthiwe kwenza ukulawula igundane noma ikhibhodi nokuphatha idatha ye computer eyihlane.
Hambayo Ithuluzi okuqukethwe ukuphathwa Amadivayisi kusukela LG Electronics. It isekela kubhekhaphu bese update wabashayeli idivayisi.